Buddhism and Cultural Basic Teachings and Burmese Language Basics for the Youths and Children - Saraniya Dhamma Meditation Centre
Posted on 30th November 2018 26th January 2019 by C Tun
👏👏👏 ယဥျကြေးလိမ်မာပွီး ပညာပွညျ့စုံ သောသားသမီး ရတနာမြားကွောငျ့ ဂုဏျယူနိုငျကွရသော မိဘမြားဖွဈကွပါစေ 👏👏👏
ယခုအပတျ တနင်ျဂနှနေေ့ ၂/၁၂/၂၀၁၈ မှနျးလှဲ ၁ နာရီ မှ ၃ နာရီ အထိ ကလေး လူငယျလူရှယျမြားအား ဗုဒ်ဓယဉျကြေးမှု အခွပွေု သငျခနျးစာမြားနှငျ့ မွနျမာစာ မွနျမာစကားပွော အခွခေံမြားကို သငျကွားပို့ခပြေးမညျ ဖွဈပါသဖွငျ့ စိတျပါဝငျစားပါက လာရောကျသငျယူနိုငျကွောငျး နိဗ်ဗာနျအကြိုးမြှျော၍ နှိုးဆျောအပျပါသညျ။
ကလေး လူငယျ မြားကို သာရဏီယဓမ်မစငျတာသို့ ပို့ဆောငျ ကုသိုလျ ယူပေးကွကုနျသော မိဘ၊ အုပျထိနျးသူမြားကိုလဲ ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါသညျ။
🙏🙏🙏 မိဘကောငျးရငျ သားသမီးကောငျးမှာပဲ၊ သားသမီးကောငျးအောငျ မိဘကောငျးရမယျ၊ ဒါမှ သားသမီးကောငျးရနိုငျမယျ။
🙏🙏🙏 ဆရာကောငျးရငျ တပညျ့ကောငျးမယျ၊ တပညျ့ကောငျးအောငျ ဆရာကောငျးရမယျ၊ ဒါမှ တပညျ့ကောငျးရနိုငျမယျ။
🙏🙏🙏 ရဟနျးသံဃာကောငျးရငျ ပစ်စညျးလေးပါးနဲ့ ပံ့ပိုးတဲ့ ဒကာ,ဒကာမတှေ ကောငျးမယျ၊ ပစ်စညျးလေးပါးနဲ့ ပံ့ပိုးတဲ့ ဒကာ, ဒကာမတှေ ကောငျးအောငျ ကောငျးရာသုဂတိနဲ့ ဘဝဆငျးရဲမှ လှတျမွောကျရေးအတှကျ ဗုဒ်ဓအလိုတျောကြ နညျးလမျးပွရမယျ၊ ဒါမှ ဒကာ, ဒကာမကောငျး ရနိုငျမယျ။
🙏🙏🙏 အစိုးရကောငျးရငျ တိုငျးသားပွညျသူကောငျးမယျ၊ တိုငျးသားပွညျသူကောငျးအောငျ အစိုးရကောငျးရမယျ။ ဒါမှ တိုငျးသားပွညျသူကောငျး ရနိုငျမယျ။
👏👏👏 ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး ပညာပြည့်စုံ သောသားသမီး ရတနာများကြောင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ကြရသော မိဘများဖြစ်ကြပါစေ👏👏👏
ယခုအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ၂/၁၂/၂၀၁၈ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ မှ ၃ နာရီ အထိ ကလေး လူငယ်လူရွယ်များအား ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု အခြေပြု သင်ခန်းစာများနှင့် မြန်မာစာ မြန်မာစကားပြော အခြေခံများကို သင်ကြားပို့ချပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားပါက လာရောက်သင်ယူနိုင်ကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ကလေး လူငယ် များကို သာရဏီယဓမ္မစင်တာသို့ ပို့ဆောင် ကုသိုလ် ယူပေးကြကုန်သော မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူများကိုလဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
🙏🙏🙏 မိဘကောင်းရင် သားသမီးကောင်းမှာပဲ၊ သားသမီးကောင်းအောင် မိဘကောင်းရမယ်၊ ဒါမှ သားသမီးကောင်းရနိုင်မယ်။
🙏🙏🙏 ဆရာကောင်းရင် တပည့်ကောင်းမယ်၊ တပည့်ကောင်းအောင် ဆရာကောင်းရမယ်၊ ဒါမှ တပည့်ကောင်းရနိုင်မယ်။
🙏🙏🙏 ရဟန်းသံဃာကောင်းရင် ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ ပံ့ပိုးတဲ့ ဒကာ,ဒကာမတွေ ကောင်းမယ်၊ ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ ပံ့ပိုးတဲ့ ဒကာ, ဒကာမတွေ ကောင်းအောင် ကောင်းရာသုဂတိနဲ့ ဘဝဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ နည်းလမ်းပြရမယ်၊ ဒါမှ ဒကာ, ဒကာမကောင်း ရနိုင်မယ်။
🙏🙏🙏 အစိုးရကောင်းရင် တိုင်းသားပြည်သူကောင်းမယ်၊ တိုင်းသားပြည်သူကောင်းအောင် အစိုးရကောင်းရမယ်။ ဒါမှ တိုင်းသားပြည်သူကောင်း ရနိုင်မယ်။
🙏🙏🙏 Buddhism and Cultural Basic Teachings and Burmese Language Basics for the Youths and Children 🙏🙏🙏
1 pm to3pm on Sunday – 02/12/2018
@ Saraniya Dhamma Meditation Centre,
Manchester, United Kingdom M7 2GD
🙏 Special thanks to all the parents and guardians who gave up their time to bring their children to the centre.
Children enjoyed their friend’s company during their time here in their last session in November, developing their knowledge in what’s right and wrong according to the Buddha’s teachings and happily participated in the language activities and games.
💬 +44 (0)161 281 6242